‘अब दाइहरू अभिभावक बनेर बस्नुपर्छ’ : प्रकाशमान सिंह- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ । विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । १३ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा जिताउन निर्णायक भूमिका खेलेका निधि, अर्जुननरसिंह केसी, गोपालमान श्रेष्ठजस्ता नेताहरू देउवा क्याम्पबाट बाहिरिएका कारण यसपटक उनलाई सभापतिमा जित्न कठिन हुने देखिन्छ ।
अर्कोतिर पौडेल समूहले साझा उम्मेदवार उठाउने कुरा गर्दै आएको छ । त्यस्तै कांग्रेसमा नेतृत्वको पुस्तान्तरणको मुद्दा पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । यसै विषयमा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री र यसपटक सभापतिका आकांक्षीसमेत रहेका प्रकाशमानसिंहसँगको कुराकानी :
पौडेल पक्षमा एकमत हुने सभावना छ ?
१३ औं महाधिवेशनमा रामचन्द्रजीलाई अघि बढाएकै हो । विभिन्न कारणले जिताउन सकिएन । अहिले देशभरका कार्यकर्तामा शेरबहादुर देउवाले पार्टी चलाउन सक्नु भएन, तौरतरिका भएन, कमीकमजोरी भए भनेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । देउवा मात्रै नभएर समकालीनलाई पनि हाँक्न कठिनाइ हुन्छ भन्ने भावना छ ।
पहिलो लेयरका दुई नेता (देउवा र पौडेल) ले अब नयाँलाई सम्मानजनक निकास दिनुपर्छ । यो कुरा रामचन्द्र दाइलाई मैले अनुरोध गरिसकेको छु । हामीले सहयोग गर्दैमा अब नेता–कार्यकर्ताले पहिलो पुस्तालाई भोट हाल्ने स्थिति देखिन्न । १३ औं महाधिवेशनमा जित्न नसकेपछि पौडेल दाइलाई यसपटक झन् गाह्रो छ । उहाँहरूले प्रजातन्त्रको अभियानमा विशेष योगदान गर्नुभएको छ । अब सम्मानजक निकास दिने समय आएको छ । हाम्रो अभिभावक बनेर बस्नुपर्छ ।
एउटै टिम बन्न सकेन भने त्यसको लाभ सभापतिलाई नै पुग्छ होला नि ?
अबको नेतृत्व शेरबहादुरजी जस्तो व्यक्ति हुन हुन्न भनेर पार्टीका साथीहरूले उदाहरण दिने गर्छन् । समय छँदा अधिवेशन गराउन सक्नु भएन । उहाँको नेतृत्वमा पार्टी झन् कमजोर भयो । जिल्लाबाट साथीहरूले यस्तो नेतृत्वलाई राखिराख्ने तपाईंहरूको पनि कमजोरी हो भन्न थाल्नुभएको छ ।
नेतृत्व दिन नसक्नेहरूलाई पदमा राख्न हुन्न भन्ने दबाब छ । शेरबहादुर दाइ १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति भएपछि पार्टी निकै कमजोर भयो । कांग्रेस कमजोर हुँदा कम्युनिस्टको दुस्साहस बढ्यो । दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेको कांग्रेस कमजोर भएकैले हो ।
तपाईं आफैंले दाबी छाड्नुहुन्छ ?
म गणेशमानको छोरा भएर मात्रै राजनीतिमा आएको होइन । नेविसंघको साधारण सदस्य, जिल्ला सभापति, पार्टीको जिल्ला सभापति बन्दै संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएको हुँ । पार्टीको उपसभापति, महामन्त्री भइसकें । सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भइसकें । मेरो काम गर्ने शैली र सक्रियता साथीहरूलाई थाहा छ । कांग्रेस बनाउन यत्रो लगानी गरेको मान्छे चुप लागेर बस्न हुन्न भन्ने दबाब छ । यो पार्टी चलाउन मैले सक्छु भनेरै अघि बढेको छु ।
पौडेल, शशांक, शेखर र तपाईंमध्ये को हुने हो त उम्मेदवार ?
हामी चार जना अहिले एकै ठाउँमा छौं । बैठक भइरहेको छ । व्यक्तिगत कुराकानी भइरहेका छन् । समझदारी बनाउन सजिलो छैन । सबैको चाहना छ । जबर्जस्ती गर्ने कुरा भएन । सबैको चित्त बुझाएरै गर्ने हो । जिल्ला, क्षेत्रका अधिवेशन सम्पन्न भएर प्रतिनिधि आएपछि एउटा तस्बिर आउँछ । त्यसपछि को कति बलियो हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यतिबेला आफैंले मूल्यांकन गरेर एउटा टिम बनाउन सहयोग गर्ने हो ।
एउटै टिम बन्न सक्छ त ?
राजनीति हो भन्न सकिन्न । केही अघि यहीं (चाक्सीबारीमा) हाम्रो बैठक बसेको थियो । पार्टी सभापतिमा शेरबहादुरलाई राखिराख्ने हो भने यो पार्टी अझ तहसनहस हुन्छ । राम्रो हुन्न । १४ औं महाधिवेशनमा हामी सबै मिलेर टिम बनाएर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । एउटै टिम बनाउन सक्यौं भने नेतृत्व लिन सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास छ । त्यसैको अभ्यास अहिले भइरहेको छ ।